Akụkọ - Ọchịchọ itinye ego ike na Middle East na North Africa
Ọchịchọ itinye ego ọkụ na Middle East na North Africa
Aghọtara na na 2021, arịrịọ itinye ego ọkụ eletrik na Middle East na North Africa ga -eru nso ijeri dọla 180 iji gboo mkpa ọkụ eletrik na -arịwanye elu.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, "Gọọmentị na -aga n'ihu na -azaghachi ihe ịma aka a site n'ịgbalite ọrụ ọhụrụ na ịkwalite akụrụngwa iji gboo mkpa na -arịwanye elu, ma na -agba ndị ọrụ onwe na ụlọ ọrụ ego ume isonye na itinye ego na ụlọ ọrụ ike." Azụmaahịa ike na Middle East na North Africa bụ ugbu a n'azụ ahịa mba ụwa, mana enwere nnukwu ohere.
Nkwupụta ahụ na -atụ aro na gọọmentị mba dị iche iche nwere ike imekọrịta ihe na mba ndị agbata obi ha ka ha wee leba anya n'ikike ịzụ ahịa ọkụ eletrik dị ka mgbakwunye maka ikike mmepụta ha na -abawanye. Agbanyeghị na ụfọdụ njikọ ọkụ nke mba dị na Middle East na North Africa nwere njikọ, azụmahịa ka dị ala, ha na -emekarị naanị n'oge ihe mberede na ọkụ eletrik. Kemgbe afọ 2011, mba ndị so na Council Cooperation Council na -eme azụmahịa ikike mpaghara site na Mmemme Njikọ Njikọ Ọchịchị Gulf (GCCIA), nke nwere ike iwusi nchekwa ike ike ma bulie uru akụ na ụba nke arụmọrụ.
Dị ka data GCCIA si kwuo, uru akụ na ụba nke njikọ njikọ ike karịrị nde $ 400 na 2016, ọtụtụ n'ime ha sitere na ike arụnyere. N'otu oge ahụ, njikọta okporo ga -enyekwa aka iji akụrụngwa ike dị adị rụọ ọrụ nke ọma. Dabere na atụmatụ nke Banklọ Akụ Akụ Worldwa si kwuo, ikike itinye ikike ikike mpaghara ahụ (ihe na -akpata ikike) bụ naanị 42%, ebe ike njikọ njikọ dị ugbu a dị ihe dịka 10%.
Agbanyeghị na anyị na -atụ anya iwusi mmekorita ike ma melite azụmaahịa ike mpaghara, ọtụtụ nsogbu na -egbochi ọganihu dịka nchekwa ike. Ihe ịma aka ndị ọzọ gụnyere enweghị ike ụlọ ọrụ siri ike yana usoro iwu doro anya, yana enweghị ike na -enweghị ọrụ, ọkachasị n'oge oge chọrọ.
Nkwupụta ahụ kwubiri: “Mpaghara Middle East na North Africa ga -aga n'ihu na -etinye nnukwu ego na ike imepụta ọkụ na akụrụngwa nnyefe iji gboo mkpa na -eto eto na mmezigharị ike. Mgbanwe dị iche iche nke usoro mmanụ ọkụ bụ nsogbu edozighi na mpaghara a. ”